အင်္ဂလိပ်စကားဘယ်လိုပြောမလဲ ? - Myanmar Network
Posted by AungKoU (UMK) on October 14, 2012 at 21:42 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စကားပြောခြင်းသည် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် အလွန်အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှ အကြောင်းအရာများစွာကိုစကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြရသည်။ စကားကိုစနစ်တကျ ပြောတတ်ခြင်းသည်လည်းအရည်အချင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားကိုပင် စကားပြောတတ်သူတိုင်းမိန့်ခွန်းများ၊ ဟောပြောချက်များစသည်ဖြင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို စနစ်တကျပြောဆိုတတ်ရန် မလွယ်ဘဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွက်မူပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးအရေးကြီးသည်မှာ ယခင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအသံ၏သဘောတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ရမည်။
စကားပြောခြင်းဆိုသည် ပန်ကုံးတစ်ကုံးသီကုံးသည်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူပါသည်။ ပန်းကုံးတစ်ကုံးသီကုံးရာတွင် ပန်းကုံးတွင်ပါဝင်သောအရာများကိုစနစ်တကျမသုံးသပ်မိကြသကဲ့သို့ စကားတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရန်မေ့လျော့ နေတတ်ကြသည်။ ဆဲလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပွင့်ချပ်များပါဝင်သည့် ပန်းပွင့်များကိုအပ်ချည်ကြိုးဖြင့်သီးကုံးလိုက်သောအခါ ပန်းကုံးတစ်ကုံးဖြစ်လာသည်။ ထို့အတူစကားပြောခြင်းသည် အသံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောစကားလုံးများကို ဝါကျများအဖြစ် တည်ဆောက်ကာ ၎င်းဝါကျများကိုပြောလိုသောအကြောင်းအရာသက်ရောက်အောင် စုစည်းလိုက်ခြင်းဖြင့် စကားဖြစ်လာသည်။
ပန်းကုံး = စကား
ပန်းပွင့် = ဝါကျ
ပွင့်ချပ် = စကားလုံး
ဆဲလ် = အသံ
အပ်ချည်ကြိုး = ပြောလိုသောအကြောင်းအရာ
ဖော်ပြပါဆက်စပ်မှု ပုံစံသည် ဘာသာစကားလေ့လာသူတိုင်းအတွက် စနစ်တကျလေ့လာသင်ယူရန် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။ စကားပြောဆိုရာတွင် အရေးကြီးသည့် အခြေခံအကြောင်း (၂) ချက်မှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားရန် နှင့် ချောမွေ့ပြေပြစ်ရန် ဖြစ်သည်။ ပြောစကားတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် အရေးကြီးသောအကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်သောကြောင့် အသံကိုစနစ်တကနားလည်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်၊ အသံ၏သဘောတရားများကိုသေသေချာချာနားလည်မှသာပြောစကားများကိုနားလည်နိုင်ပြီး ပြန်လည် အတုယူပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ ဦးစွာအသံ၏ သဘောတရားများကိုအသေးစိတ်ပြောလိုပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အသံထွက်(pronunciation) နှင့် စာလုံးပေါင်း(spelling) ထပ်တူမညီသည်မှာ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခန့်အထိရှိသည်။ စာလုံးပေါင်းပုံစံတူသော်လည်းအသံထွက်မတူသည်ကိုအများအပြားတွေ့ရမည်။ (e.g. put, but)
စာလုံးပေါင်းပုံစံမတူဘဲအသံထွက်တူညီသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ (e.g. see, key, tea) အက္ခရာတစ်ခု(alphabet) သည် စကားလုံးတစ်ခု၏ စာလုံးပေါင်းတွင်ပါဝင်ပြီးအသံထွက်ရာတွင် မပါဝင်သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။(e.g. psychology, listen) ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကိုစာလုံးပေါင်းအတိုင်းအသံထွက်၍မရသောကြောင့် အသံများကိုသေသေချာချာလေ့လာရန်လိုသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အက္ခရာ(alphabet) ၂၆ လုံးသာ ရှိသော်လည်း ဗျည်းသံ(consonant sound) ၂၄ သံ နှင့် သရသံ(vowel sound) ၂၀ စုစုပေါင်း ၄၄-သံရှိသည်။ အသံထွက်များကိုစာဖြင့်အတိအကျ ရေးသားဖော်ပြရန် မလွယ်ကူသဖြင့် အသံထွက်သင်္ကေတ (phonetic symbols) များနှင့် ဥပမာစကားလုံးများဖြင့်သာဖော်ပြပါမည်။
- ဗျည်းသံများ(consonant sounds)
p pen, copy, tap
b back, baby, job
t tea, tight, knot
d day, ladder, odd
k key, school,clock
g get, giggle, dog
tʃ church, match, nature
dʒ judge, age, soldier
f fat, coffee, rough
v view, heavy, move
θ thing, author, path
ð this, other
s soon, cease, sister
z zero, music, roses, buzz
ʃ ship, sure, national
ʒ pleasure, vision
h hot, whole, ahead
m more, hammer, sum
n nice, know, funny, sun
ŋ ring, anger, thanks, sung
l light, valley, feel
r right, wrong, sorry, arrange
j yet, use, beauty, few
w wet, one, when, queen
ʔ (glottal stop) department, football
- သရသံများ (vowel sounds)
ɪ kit, bid, minute
e dress, bed, head
æ trap, bad
ɒ lot, odd, wash
ʌ strut, mud, love, blood
ʊ foot, good, put
iː fleece, sea, machine
eɪ face, day, break
aɪ price, high, try
ɔɪ choice, boy
uː goose, two, blue, group
əʊ goat, show, no
aʊ mouth, now
ɪə near, here, weary
eə square. fair, various
ɑː start, father
ɔː thought, law, north, war
ʊə poor, jury, cure
ɜː nurse, stir, learn, refer
ə about, common, standard
i happy, radiate, glorious
u thank you, influence, situation
n̩ suddenly, cotton
အသံ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဗျည်းသံ၊သရသံများသာမက stress သည်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစကားဖြစ်ရန်အတွက် ဖိသံ(stress)ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဖိသံ(stress)ကိုနားလည်ရန် စကားလုံးတစ်လုံးတွင် ပါဝင်သောအသံ(ဝဏ္ဏ)များကိုသိရမည်။
ဥပမာ syl-la-ble အသံ(ဝဏ္ဏ) ၃-သံ
in-sti-tu-tion အသံ(ဝဏ္ဏ) ၄-သံ
၎င်းအသံ(ဝဏ္ဏ) များပေါ်တွင် ဖိသောအသံ(stress)ကို'အမှတ်အသားဖြင့် ဖော်ပြသည်။
စကား၏ဝတ္တရား(part of speech) အပေါ်တွင်မူတည်၍ stress ပြောင်းသွားတတ်ပါသည်။ အသံ-၂သံ ရှိသောစကားလုံးတစ်လုံးတွင် နာမ်(noun)ကိုပထမအသံတွင် ဖိရပြီး ကြိယာ(verb) ကိုဒုတိယအသံတွင် ဖိရသည်။
ဥပမာ noun verb
ချွင်းချက် ad'dress ad'dress
ရှေ့ဆက်ပုဒ်များဖြစ်သော a-, be-,re- စသည်တို့ပါဝင်သောအသံ(၂)သံရှိစကားလုံးများတွင် စကားလုံး၏မူလအသံတွင်သာstressရှိသည်။
e.g. a'loud a'rise a'loft
br'fore be'come be'hind
re'clim re'sent re'turn
e.g. (a) -eer engi'neer volunt'eer black marte'teer
(b) -iee addre'see pay'ee emplo'yee
(c) -ique uni'ique physi'que ob'lique
(d) -ain ob'tain enter'tain ascer'tain
(e) -esque pictu'resque gro'tesque bur'lesque
(f) -esec co'alesce
(g) -itis arthr'itis bron'chitis
(h) -ete de'lete comp'lete
(i) -aire question'naire million'naire
(j) -ette cigare'tte cass'ette
(k) -ade lemo'nade per'vade
(l) -ever when'ever how'ever
(m) -ese chi'nese bur'mese
(n) -esent ado'lesent efferve'sent
စကားပြောဆိုရာတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းနားလည်နိုင်စေရန်intonationကလည်းအရေးကြီးပါသည်။ စကား၏အဓိပ္ပာယ်၊ စကားပြောသူ၏သဘောထား၊ စကား၏ဆိုလိုရင်းစသည်တို့ကိုနားလည်နိုင်ရန် intonation ကကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ စကားပြောဆိုရာတွင် intonation ပြောင်းသွားပါကလည်းဆိုလိုရင်းရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားနိုင်သည်ကိုသတိပြုရမည်။အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရာတွင်နားလည်ထားရမည့်အခြေခံ intonation (၃)မျိုးကို"အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုချဉ်းကပ်ခြင်း"ဆောင်းပါး (Education Digest Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၃၅၊၃၆)တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။
အသံထွက်သည် listeningအတွက်ရော speaking အတွက်ပါ အလွန်ရေးကြီးပါသည်။ အသံထွက်ကိုသတိမထားပါကနားထောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်းနားလည်မှုလွဲမှားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- row နှင့် roll ကိုကြားသောအခါ သတိမထားပါကနားကြားလွဲကာအဓိပ္ပာယ်ပါလွဲမှားနိုင်သည်။
အသံ၏သဘောတရားများကိုနားလည်လျှင် ၎င်းကိုအခြေခံကာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုမည်သို့ လေ့ကျင့်ရမည်ကို ဆက်လက်ပြောလိုပါသည်။ပထမဆုံးသတိပြုရန်အချက်မှာမှန်ကန်သည်အထိထပ်ခါထပ်ခါ၊ အကြိမ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ခြင်းသည် လေ့လာမှုအားလုံးအတွက် အမြန်ဆုံးသောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
- Television, Video, News, Tape, CD, DVD စသည်များကိုအသုံးပြုကာNative speaker များ၏အသံများကိုတတ်နိုင်သမျှနားထောင်ပါ၊ ၎င်းကိုအတုယူပြီးပြောဆိုခြင်းဖြင့် တိကျသော sound, stress, intonation များကိုရရှိနိုင်သည်။ အတုယူပြောဆိုရာတွင် Video Lesson များဖြစ်ပါက ၎င်းတို့၏ပါးစပ်လှုပ်ရှားမှုကိုသတိထားပြီးလေ့လာပါ၊ အသံထွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။
- အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ရာတွင် တေးဂီတများသည်လည်းအလွန်ထိရောက်သည်၊ လူတိုင်းသည် ဂီတကိုနှစ်သက်ကြသောကြောင့်တေးသီချင်းများကိုလိုက်ဆိုခြင်းကစကားပြောရာတွင်ချောမွေ့စေနိုင်သည်။
- တစ်နေ့လျှင် ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့် စာပိုဒ်များကိုအသံထွက်ဖတ်ပါ၊ စာဖတ်ရာတွင် အသံထွက်များကိုကြိုးစားပြီးမှန်မှန်ကန်ကန် ဖတ်ပါ၊ သုံးလခန့် ဆက်တိုက်ဖတ်လျှင် ပါးစပ်ကြွက်သားများသန်မာပြီးစကားပြောရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကိုသုတေသနများတွင် အတိအကျဖော်ပြထားသည်။
- အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ရာတွင် မိမိ၏အသံကိုအသံဖမ်းပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၊ မူရင်းအသံများနှင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးကာအမှားများကိုသတိထားပြီးမှန်သည်အထိအကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် လေ့ကျင့်ပါ။ ပထမဆုံးအသံထွက်မှန်ရန်သာ ကြိုးစားပါ၊ အသံမှန်သောအခါ stress, intonation များကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ၊ လေ့ကျင့်ရာတွင်သတိပြုရမည်မှာ ကြားသည့်အတိုင်းဆိုပါ၊ ဤနေရာတွင် စာဖြင့်ဖော်ရသည်မှာအတန်ခက်ခဲပါသည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ယနေ့ခောတ်ကလေးငယ်များသည် 'Justin Bieber 'စသည့် ရေပန်းစားသည့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းများကို ကြားရများလာသောအခါ နားရည်ဝပြီးသီဆိုတတ်ကြသည်၊ သီဆိုရာတွင် ပီပီသသမှန်မှန်ကန်ကန် သီဆိုနိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ ၎င်းကလေးငယ်များသည် ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်ဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကမူနားကကြားသော်လည်း မူလအသံကိုမှန်ကန်ရန် မကြိုးစားဘဲ မိမိအသံထွက်တတ်သလိုဆိုတတ်ကြသည်၊ ထိုအချက်ကိုသတိထားဆင်ခြင်ကြရမည်။
- အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားသောစာသင်ခန်းအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းတတ်နိုင်သမျှ အင်္ဂလိပ်လိုသာပြောဆိုပါ၊ မိမိလေ့ကျင့်မှတ်သားထားသောစကားလုံး၊ ဝါကျများကို အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့် အချိန်တိုင်းတွင် ထည့်ပြီးပြောပါ။
- ရိုးရိုးစကားပြောပုံစံများလေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ မိန့်ခွန်းများ၊ သတင်းများအစရှိသည်ဖြင့် လိုအပ်သည်များကိုအထက်ပါနည်းများအတိုင်းဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ၊ စကားပြောဆိုရသည့် အခြေအနေပြောင်းသည်နှင့်အမျှ ပြောရသည့်ပုံစံများပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဈေးဝယ်ရာတွင် ပြောသည့်စကားပြော နှင့် ရုံးဋ္ဌာနများတွင် ပြောသည့်စကားပြောပုံစံများ တူမည်မဟုတ်ပါ။ (စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ လေယူလေသိမ်း၊ အထူးသဖြင့် ပြောဟန်ဆိုဟန်များ မတူညီသည်ကိုဆိုလိုသည်)
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုအခြေခံကာနေ့စဉ်မှန်မှန် လေ့ကျင့်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချောချောမွေ့မွေ့ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ "The fastest way to learn anything is to do again and again until to get it right."ဟူသောစကားအတိုင်းလိုချင်သည့် ပန်းတိုင်ကို ရာက်သည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ကာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း ရေးသားလိုက်ပါသည်။
( “အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်” ဆောင်းပါးတွင် ချန်လှပ်ထားခဲ့သော Phonetic symbols များကို ယခု ဆောင်းပါးတွင်ရေးသားလိုက်ပါသည်။ )
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှု၍ အဆင်မပြေပါက PDF ဖိုင်ဖြင့် download လုပ်နိုင်ပါသည်။
Ref: SPOKEN – CONVERSATIONAL ENGLISH; A Resource Book for Teachers of English
Assistant English Language Teacher
U MYA KYAING ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for life
Email : aungkou.englishlanguageclass@gmail.com
Face book: www.facebook.com/aungkou
Phone: (95)973185818
22 members like this
ဘယ်လိုပြောမလဲ.pdf, 277 KB
Permalink Reply by Khin Su Hlaing on October 18, 2012 at 14:05
ွှ့ိ့thank you for your suggestion... !
Permalink Reply by Zaw Win on October 22, 2012 at 14:40
Thanksalot of your goodwill.
Permalink Reply by Aung Bo Hein on November 29, 2013 at 10:49
အား​ပေး​နေပါတယ်​ ဆက်​လက်​ပီးတင်​​ပေးပါ Thanks
Permalink Reply by Su win myat on October 5, 2014 at 20:46
Too late knowledge.
Big City Small World ဇာတ်လမ်းပမာသင်ခန်းစာ
အလုပ်လျှောက်ထားခြင်း ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ
Post နှင့် Comment များမတင်မီ အသင်းဝင်တိုင်း ဖတ်ရှုရမည့် စည်းကမ်းများ
UK စာမေးပွဲသတင်းများ ၂၀၁၈ ဧပြီလ
UK စာမေးပွဲသတင်းများ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ
New Resources for Mid September 2017
၂၀၁၇ ဇူလိုင်လတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော IELTS Preparation Talk Presentation Powerpoint နှင့် အသံဖိုင်
ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် “လက်ခတ်သံ” မြန်မာ့ရိုးရာရက်ကန်းထည်ဆိုင်ရာပြပွဲ ကျင်းပမည်
IELTS စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံနှင့် ပြင်ဆင်လေ့လာသင့်သည့် အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးထားသော အသံဖိုင်
၂၀၁၇ မေလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော IELTS Preparation Talk Presentation Powerpoint Slide နှင့် အသံဖိုင်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်ပြီးသူများအတွက် ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်၏ အထူးအစီအစဉ်
© 2019 Created by Myanmar Network. Powered by
This site is best viewed with Google Chrome and you will need to download and install Zawgyi One font to see Myanmar characters.
British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). Privacy and cookies. Our commitment to freedom of information.
© Copyright 2018 Myanmar Network